ဆွမ်းဘုန်းပေးခါနီး အုန်းမောင်းခေါက်တာ ဘာကြောင့်လဲ ? – Myanmar Breaking News
ဂျပန်ခေတ်က ဖြစ်သည်စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး မင်္ဂလာစေတီချောင်သို့ဂျပန်အရာရှိတစ်ဦးနှင့် စကားပြန်တစ်ဦးရောက်လာ၏ဆွမ်းစားချိန်ဖြစ်သောကြောင့် ကြေးမောင်းထိုးတုံးခေါက်ရာ ဂျပန်အရာရှိက ဘာလုပ်တာလဲ ဟုမေး၏
စကားပြန်က ဆွမ်းစားမှာမို့ ကြေးမောင်းထိုးတုံးခေါက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြရာဂျပန်အရာရှိကြီးက ” ဒဘုန်းကြီးတွေ သူများလှူတဲ့ဆွမ်းစားတာတောင် ဒီလို ကြေးမောင်းတွေတုံးတွေခေါက်ပြီးစားရင် ကိုယ့်ဖာသာရှာစားရင်တော့ အမြောက်ဖောက်ပြီးများ စားမလား မသိဘူး” ဟု မှတ်ချက်ပြုသတဲ့
ထိုမှတ်ချက်ကို စကားပြန်က မင်္ဂလာစေတီဆရာတော်ကြီးအား လျှောက်ထားရာဆရာတော်ကြီးက ” ဘုန်းကြီးတို့ ဒီလိုကြေးမောင်းထိုး တုံးတွေ ခေါက်ပြီးစားတာဟာ ကြွားချင်လို့ မဟုတ်ဘူးဒီအနီးအနားမှာ ဘုရားဖူး ခရီးသွားသံဃာတော်တွေ ဆွမ်းမပြည့်စုံသေးရင်ဒီနေရာမှာ ဆွမ်း ဆွမ်းဟင်းအပြည့်အစုံ ရှိပါတယ်ဆွမ်းစားကြွတော်မူကြပါလို့ အသိပေးဖိတ်ကြားတာ ဖြစ်​တဲ့အပြင်
​ နောက်​ပြီး​တော့ ရွာ​တွေက ဆွမ်း ဆွမ်းဟင်း ​လောင်းလှူ​ကြသော ဆွမ်​ဒါယိကာ ဆွမ်းဒါယိကာမ များအ​နေဖြင့့်​မိမိတို့လှူလိုက်​တဲ့ ဆွမ်း ခဲဘွယ်တို့ကို ​ဆရာ​တော်​ သံဃာ​တော်​များ ဘုန်း​ပေးသုံး​ဆောင်​ ​တော့မှာဖြစ်​တဲ့အတွက်​အလှူရှင်​များအ​နေဖြင့်​ ​ကောင်းမှုကုသိုလ်​ အစုစုအတွက်​ သာဓုအနု​မောဒနာ ​ခေါ်ဆိုနိုင်​ဘို့ဖြစ်​တယ်​ တကာဟု ရှင်းပြ၏
ဆရာတော်ကြီး ရှင်းပြတာကို နားထောင်၍ဂျပန်အရာရှိကြီးက နားလည်သဘောကျသည့်အနေဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် အလေးပြုသွားသည်ဟူ၏ပေးလိုသည့် မှတ်ချက်မှာ ခရီးသွား ဆရာတော်သံဃာတော်တို့အနေဖြင့် ဆွမ်းဘုဉ်းချိန်ရောက်လျှင်စားသောက်ဆိုင်များဝင်၍ အကုန်အကျခံဘုဉ်းပေးတော်မမူကြပါနှင့်သိသိ မသိသိ ဆွမ်းစားချိန် ကြေးမောင်းထိုးတုံးခေါက်သော ကျောင်းတိုက်များသို့သာဝင်ရောက် ဘုဉ်းပေးတော်မူကြပါ၎င်းကြေးမောင်းသံ တုံးခေါက်သံတို့သည်အရှင်ဘုရားတို့အား ဆွမ်းစားပင့်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါပေ၏
photo by ဘုန်းမင်းမြတ်
ဆှမျးဘုနျးပေးခါနီး အုနျးမောငျးခေါကျတာ ဘာကွောငျ့လဲ ? သိခငျြလို့ လိုကျရှာနတော ကွာပွီဗြာ ခုမှသိရတော့တယျ ?
ထိုမှတျခကျြကို စကားပွနျက မင်ျဂလာစတေီဆရာတျောကွီးအား လြှောကျထားရာဆရာတျောကွီးက ” ဘုနျးကွီးတို့ ဒီလိုကွေးမောငျးထိုး တုံးတှေ ခေါကျပွီးစားတာဟာ ကွှားခငျြလို့ မဟုတျဘူးဒီအနီးအနားမှာ ဘုရားဖူး ခရီးသှားသံဃာတျောတှေ ဆှမျးမပွညျ့စုံသေးရငျဒီနရောမှာ ဆှမျး ဆှမျးဟငျးအပွညျ့အစုံ ရှိပါတယျဆှမျးစားကွှတျောမူကွပါလို့ အသိပေးဖိတျကွားတာ ဖွဈ​တဲ့အပွငျ​ နောကျ​ပွီး​တော့ ရှာ​တှကေ ဆှမျး ဆှမျးဟငျး ​လောငျးလှူ​ကွသော ဆှမျ​ဒါယိကာ ဆှမျးဒါယိကာမ မြားအ​နဖွေငျ့​မိမိတို့လှူလိုကျ​တဲ့ ဆှမျး ခဲဘှယျတို့ကို ​ဆရာ​တျော​ သံဃာ​တျော​မြား ဘုနျး​ပေးသုံး​ဆောငျ​ ​တော့မှာဖွဈ​တဲ့အတှကျ​အလှူရှငျ​မြားအ​နဖွေငျ့​ ​ကောငျးမှုကုသိုလျ​ အစုစုအတှကျ​ သာဓုအနု​မောဒနာ ​ချေါဆိုနိုငျ​ဘို့ဖွဈ​တယျ​ တကာဟု ရှငျးပွ၏
photo by ဘုနျးမငျးမွတျ